Ihe ọhụụ Vivo ọhụụ pụtara na TENAA nwere nnukwu batrị | Gam akporosis
Vivo bụ otu n'ime ọtụtụ ụlọ ọrụ dị na ụlọ ọrụ ama ama na-agbasosi ike ịnọ na ahịa, yana ọtụtụ mbupụta ọnụ na ya, ya mere, ụdị dị iche iche dị na ya. Nke a na-emekarị anya na nchekwa data nke TENAA, Chinese usoro iwu na-egosi na gị n'ụlọnga nke niile igwe nke a ga-ere ahịa na nnukwu mba Eshia gafere.
N'oge a, edebanyela ekwentị ọhụrụ nke ika ahụ n'elu ikpo okwu nke ụlọ ọrụ ahụ kwuru. Emere ya site na nnabata ma hapụ njirimara ya niile na nkọwapụta teknụzụ ya n'oge, yabụ anyị amatalarị ihe Vivo na-echere anyị ya na nke ọzọ ma ọ bụ otu nke ọhụụ ya ọzọ.
Nlereanya ụlọ ọrụ ahụ nke gafere n'aka TENAA na mmepe nso nso a bụ V1928A. Nke a pụtara na ihuenyo 6.358 nke nwere HD + mkpebi nke pikselụ 1,544 x 720 na akara ngosi n'ụdị mmiri mmiri. A hụkwara ya na octa-core processor 2.0 GHz - nke nwere ike ịbụ Mediatek (yikarịrị) -, RAM nke 3 ma ọ bụ 4 GB na oghere nchekwa dị n'ime nke 32 ma ọ bụ 64 GB ikike (gbasaa site na microSD ruo 256GB) , karị. Ihe kachasị dị ịtụnanya, ikekwe, batrị 4,880 mAh nke ọ na-ebu, nke nwere nkwado maka ịgba ụgwọ ngwa ngwa.
Ana m ebi V1928A na TENAA
Ngwaọrụ ahụ na-etu ọnụkwa igwefoto azụ atọ, nke nwere ihe ntinye akara mkpịsị aka dị nso. Igwe foto a nwere ihe mmetụta 13 MP bụ isi, ihe mmetụta 8 MP nke abụọ na ihe mmetụta 2 MP ikpeazụ. Maka selfies na ndị ọzọ, anyị nwere onye agba egbe 8 MP.
Vivo Z5 na-arụ ọrụ na Snapdragon 712, igwefoto atọ na ndị ọzọ
N'aka nke ọzọ, TENAA na-agwakwa anyị na akụkụ ya bụ 159.43 x 76.77 x 8.92 millimeters, ebe ịdị arọ ya bụ gram 190.5. Ndepụta ahụ na-ekwukwa nke ga-adi na agba ola edo, ma ihe oyiyi ndị ejikọtara na-acha anụnụ anụnụ dị iche iche.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Ihe ọhụụ ọhụrụ Vivo pụtara na TENAA na igwefoto atọ na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ batrị 5000 mAh